Ngethiyetha egazini. Umhlobo wam umbhali, umdlali weqonga kunye nomlawuli uMari Carmen Rodríguez. | Uncwadi lwangoku
Inqaba yecawa yaseSanta Catalina. ILa Solana (iCiudad yokwenene). Ifoto ka (c) Mariola Díaz-Cano.
Namhlanje uza kundivumela ukuba ndishiye ecaleni uphononongo, imibhiyozo, iindaba okanye uphononongo loncwadi olukhulu lwayizolo, namhlanje nangomso. KwiPasika edlulileyo, umntu uye edolophini yakhe kwaye uhlala ehlala enxibelelana nabahlobo abasekhona okwethutyana. UKUYA omnye wabo bahlobo, ukuqala ebuntwaneni, eli nqaku linikezelwe.
Ukunxiba Ithiyetha egazini kwaye ingumbhali, umdlali weqonga kunye nomlawuli wemisebenzi yakhe, ukongeza kulungelelwaniso okanye ukuthatha inxaxheba kwezinye. Kwimeko yakho, ngokuqinisekileyo ziya kubakho ezininzi. Ababhali abangaziwayo abavela kwezinye iindawo ezininzi, abangaziwayo kuluntu ngokubanzi kodwa abaziwa kakhulu ngababo. Wazi ukuba akukho namnye we-idiosyncrasy yedolophu kunye nabemi bayo kwaye banakho ukuyibonakalisa kwaye babonakalise umsebenzi weendlela ezintathu. NjengoMari Carmen Rodríguez. Iya kubo bonke.
4 Ngoko ...
Ndimazi uMari Carmen ukusukela xa sasineminyaka esixhenxe ubudala kwaye ndafika njengomfundi omtsha kwisikolo saseSan Luis Gonzaga edolophini yam. Masikhe sithi okwethutyana eladlulayo. Ngelo xesha, kwaye ukuba mtsha, konke kuya kulungelelanisa, ukudibana namanye amantombazana kunye nokwenza abahlobo bokuqala. Inkqubo ye- ISan Luis Gonzaga emva koko yayingaxutywanga kwaye ziqhutywa ziiNtombi zikaCharity. Iinkumbulo zam zokuqala ezicacileyo kuye ziyi-3º ye-EGB umbukele ebhala ebhodini xa laa Dade umangalisayo uEmilia wasikhupha ukuba siphume. UMari Carmen unjalo ndinesandla sasenxele kwaye ndanomdla wokumbona.
Emva kwexesha, kubonisa ukuzithemba kunye nobuchule bokuyila, Kumatheko esikolo ngeKrisimesi okanye ukuphela konyaka, uMari Carmen wayephethe ukubhala imidlalo yakhe. Kwakhona, Ndikhethe isamente phakathi kwazo esifuna ukuthatha inxaxheba kwaye wasinika abalinganiswa ngokuchanekileyo kubuntu bethu (kunye nembonakalo). Kunjalo, usikhokele kwaye wagcina nendawo yesibini kodwa ubunzima.
Wayedla ngokundinika indima yenkwenkwana eyomeleleyo nelungileyo eyayingumfana, umhlobo okanye oncedisayo ophambili. Ngenxa yenyani, lAbalinganiswa abangamadoda sibenze bathanda ezakudala zamaGrike kodwa ngasemva. Ndonwabile nje ukupeyinta amadevu ngesikhonkwane esitshisiweyo ndanxiba ibhatyi netayi kutata. Oko ndikwanalo nephetshana elinje yayingumququ wokugqibela.
Isihloko esihlala sihleli kwimemori yam yenye yezo zinto Ityhefu ngokuchasene netyhefu, esele isitsho kakhulu malunga nento enokuhamba. Kwakuhlala kukho imfihlakalo ethile, ulwaphulo-mthetho okanye impazamo leyo, ngokwendalo, iphele isonjululwa kwaye ilungile.
Ngokutolikwa egazini lakhe, ndiyagxininisa ukuba umgangatho kaMari Carmen uyaqhubeka nokubhala imidlalo yakhe, eyalathisa kwaye ayenze, ngoku kwiworkshop yakhe yeqonga, Ikholosseum casserole, ngaphakathi kumbutho INTSHOLONGWANE (Umbutho weeNtsapho kunye nabafazi baseMaphandleni), nezitulo zakhe. Ukongeza, yinxalenye yenkampani yeqonga lemidlalo yeqonga UMargarita Xirgú.
Kwinkampani UMargarita Xirgú.
AtrabilisnguLaila Ripoll. Wadlala ispinster esikrakra nesomona esigama linguDaria.
Iithayile eziluhlaza. Amagqabantshintshi. Uthotho lwabalinganiswa bagxeka ukungcungcuthekiswa okwenziwa eChile ngexesha likaPinochet. Wayeyintsomi.
Amadama, Ngu-Ignacio del Moral kunye noVerónica Fernandez. Ndimbonile etolika ngobuchule uMari Cruz ovukelayo.
Indlu kaBernarda Alba, Ukusuka eLorca, apho wayekhona uMartirio.
Abanye uthando olungabulaliyoIinguqulelo zeDulce Chacón. Iimonologi ezichasene nobundlobongela obuphathelele kwezesini.
Iisainetes zabazalwana UAlvarez Quintero njenge Igumbi elincinci leyure, Igazi elinamanqatha, Iingxabano kunye nemicimbi yothando.
Ndiyindoda, de UCarlos Arniches.
Amagama entlabathiNgu-Antonio Buero Vallejo.
Umsebenzi wakho nawo umelwe:
Ulungelelwaniso lweZarzuelas njengaye Inkundla kaFaro, Isenzi sehobe, Izigebenga kunye neentloko ezinkulu o Izityebi nabantu abangakholelwayo kubukho bukaThixo ngeeArniches.
…Intoni lo mfanekiso usebenza njengokhuthazo kunye nokwamkelwa kwabo bonke ababhali abanjengaye. Kwaye ngaphezu kwako konke uyolo lokuqhubeka ubala ngobuhlobo bakho. Sisenokugqibela ngokwenza into.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Ithiyetha » Ngethiyetha egazini. Umhlobo wam umbhali, umdlali weqonga kunye nomlawuli uMari Carmen Rodríguez.
Amanqaku angakumbi afana nale ayadingeka ukuze aqonde abo banomdla kubugcisa kunye nesisa esikhulu! Yenzelwe wena uCarmen! Kwaye enkosi kuwe, Mariola, usazise
Ungabakha njani abalinganiswa boncwadi